Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / In magan-gelyo laga raadsado Iswiidhan / In la ahaado magan-gelyo doon
Waa caadi in la dareemo caafimaad daro
Waa caadi in la dareemo wel-wel ah waxa dhici doona mustaqbalka marka qofku sugayo go'aanka ku saabsan codsiga magan-gelyo. Dadka qaarkood waxay xitaa caafimaad daro ka dareemi karaan inay soo mareen dhacdooyin aad u xun markay joogeen dalkoodi wakhtigii safarka ay ugu soo carareen Iswiidhan.
Akhri dheeraad ku saabsan waxa aad samayn kartoo haddii aad daremayso caafimaad daro.
Marka aad magan-gelyo ka codsato Iswiidhan waa lagu sawirayaa. Ka dib waxaad helaysaa waxa lagu magacaabo kaarka LMA. Wakiilkaaga caruurta kaarkaaga LMA ka soo qaadaya Hey'ada Socdaalka xafiiskeeda qaabilaada.
Akhri dheeraad ku saabsan wixii khuseeya adigaaga yimi Iswiidhan adigoo bilaa waalid ah.
Sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah Dugsi Dib u mideynta qoyska Caafimaad qabi Dad badan oo weeyn aa ku hareero Marka aad buuxiso 18 sano ama haddii da'adaada kor loo dhigo Wakhtiga firaaqada Deegaanka Dhaqaale, lacag iyo xisaabaha